गायक रामकृष्ण ढकाल दम्पत्तिको भयो डिभोर्स, यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
१कतारमा ३५ वर्ष माथिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउदैँ
२भेरी अस्पतालमा ३ घण्टामा ३ संक्रमितको मृत्यु
३के देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला ?
४नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने , छिमेकी राष्ट्रबाट संक्रमण फैलने खतरा
५शहरी क्षेत्रका विद्यालय एकमैना सम्म बन्द गर्न सिफारिस
६ओलीले बाेलायकाे सर्वदलीय बैठक सकियो ,के-के भयाे निर्णय ?
७प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच भेटवार्ता
८वरिष्ठ साहित्यकार श्यामदास वैष्णवको निधन
९बालुवाटारमा माओवादी र नेपाल समूहबिनैको ‘सर्वदलीय’ बैठक सुरु
१०ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नजाने
११त्रिकोणात्मक सिरिज : नेपाल र नेदरल्याण्ड्स दर्शकसहित खेल्दै, यस्तो छ हेड टु हेड
१२कस्तो छ आजको मौसम ? यी हुन् आज असिनासहित वर्षा हुन सक्ने स्थान
गायक रामकृष्ण ढकाल दम्पत्तिको भयो डिभोर्स, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । गायक रामकृष्ण ढकाल दम्पत्तिको सम्बन्धविच्छेद भएको छ । पत्नी निलम साह ढकालले दिएको सम्बन्धविच्छेदको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश विदुर कोइरालाको इजलासमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न उनीहरुले मिलापत्र गरेका हुन् । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठका अनुसार गायक ढकाल र निलमले सम्बन्धविच्छेद गर्न मञ्जुर छौं भनी मिलापत्र गरेका छन् ।
‘उहाँहरुले सम्बन्ध विच्छेद गर्न मञ्जुर छौं भनेर मिलापत्र गर्नुभएको छ’ उनले भने ‘बादी (निलम) ले अंश नलिने गरी मिलापत्र भएको छ ।’ ढकाल दम्पत्तिको एउटी छोरी छन्, उनी अब आमासँग रहने भएकी छन् । ढकाल र निलमबीच एक दशकअघि प्रेम विवाह भएको थियो । उनीहरुबीच लामो समययता पारिवारिक किचलो रहेको चर्चा चल्दै आएको थियो । ढकालका दर्जनौ गीत चर्चित छन् ।
यस्तै नायिका तथा मोडल वर्षा शिवाकोटीले अहिलेसम्म कुनै पनि हिट फिल्म दिन सकेकी छैनिन् । उनलाई फिल्मभन्दा बढी म्युजिक भिडियो नै फापेको छ । पछिल्लो समय उनले अभिनय गरेको फिल्म ‘वीर विक्रम २’ पूरै असफल रह्यो । फिल्ममा उनले पल शाह र नाजिर हुसेनसँग काम गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले फिल्म ‘लक्का जवान’ मा काम गरिन् । यो फिल्म कहिले रिलिज हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । यता वर्षा भने पछिल्लो समय प्रोफेसनका कारणले भन्दा व्यक्तिगत कारणले चर्चामा छिन् । उनी अमेरिकामा बस्दै आएका सविनजंग थापासँग प्रेममा छिन् । त्यसो त वर्षाको नाम मिलन चाम्ससँग पनि जोडिँदै आएको थियो । वर्षाले सविनजंग थापासँगको प्रेम पनि अझै स्वीकारेकी छैनिन् ।
यद्यपि पछिल्लो समय भने वर्षाले प्रेमिल स्टाटस नै धेरै अपलोड गर्न थालेकी छिन् । वर्षाले हालै इन्स्टामा एक तस्वीर सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उक्त तस्वीरमा क्याप्सन लेख्दै वर्षाले लेखेकी छिन् – र, यो संसारमा तिमी मेरो हो । वर्षाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा पनि अपलोड गर्ने तस्वीरमा प्राय प्रेमकै बारेमा लेखिरहेकी हुन्छिन् । प्रेमसम्बन्धका बारेमा खासै बोल्न नचाहने वर्षा सामाजिक सञ्जाल भने प्रेमबारेमै लेखेर रङ्ग्याउँछिन् । हल्ला त यो पनि चलेको छ कि, पछिल्लो समय वर्षा र मिलन चाम्सको सम्बन्ध राम्रो छैन । त्यसैले वर्षाले यसो गरिरहेकी छिन् ।
नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जाने , छिमेकी राष्ट्रबाट संक्रमण फैलने खतरा
ओलीले बाेलायकाे सर्वदलीय बैठक सकियो ,के-के भयाे निर्णय ?
प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच भेटवार्ता